Shina Heshida Famatsiam-pandeha haingana amin'ny gorodona tsy vita Pullition Traffic Paint Mpanamboatra sy mpamatsy | Meihe
Heshida Hamafana ny fanamboarana gorodona tsy vita amin'ny tsipika an-tsokosoko
Heshida mafana mivarotra Super W ...
Fitambaran'entana: 90-100 Square Meter / 10kgs
Fahalemena sarimihetsika maina: 1.5mm / Coat
Fonosana:5kgs / Bag, 2bags / Bucket
Heshida Powder Gorodona vita amin'ny gorodonaAmpiasao ny pôlitika iraisam-pirenena iraisam-pirenena, tsy misy fandotoana ny tontolo iainana an-trano sy ivelany. Ny vokatra dia manana tanjaka manarona sy fanakoranana, fahamaotinana mahery, ary fanoherana tsara indrindra, fanoherana ny rano, fanoherana ny fahalemena ary fanoherana ny korontana, ary fanoherana ny afo grade A1. Fikirizana tsara loko, Fiainana lava.
Azo ampiharina amin'ny sakafo, famoronana, indostria simika, elektronika, milina, lozika sy atrikasa famokarana hafa, trano biraon'ny trano, trano fanatobiana entana, laboratoara, coating ambonin'ny, ilaina indrindra amin'ny gorodona voalohany, lakaly, ambanivohitra tsy manam-paharoa ary tontolo iainana mora hafa.
1. Fisorohana amin'ny abrasion, fanerena ary fahasarotana;
2. Fametahana mafy sy fikojakojana mety;
3. Ny endrika hita dia malefaka sady marevaka, tsy milay ary mora diovina;
4. Fiadiana mahery vaika amin'ny fiantraikany sy ny fanoherana ny rano;
5. Fiarovana maitso sy tontolo iainana.
Previous: Heshida rindrina loko hoso-doko
Manaraka: Heshida Crystal Diamond Non-Pollosion Interal Wall loko
Valiny: Ho an'ny hosodoko rindrina anatiny, 10kg dia afaka manosika manodidina ny 100-120 aorian'ny fanosotra indroa.
Valiny: Azontsika atao ny mampiasa baoritra ho an'ny fanaovana vovobony hosodoko, ary ny siny dia misaraka, mamory ny siny mba hiarovana ny habakabaka, afaka mameno vovoka 8600kgs sy siny 860 ao anaty 20'ctnr.
3.Question: Hafiriana no mety handokoana ny loko eo anelanelan'ny palitao?
Valiny: Ny habetsaky ny fotoana itiavany ny loko ho maina dia miankina amin'ny tranga ivelany ivelany toy ny mari-pana amin'ny efitrano sy ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa ho maina ao ny rano ao anatin'ny 30-50 minitra. Na izany aza, ny coatings dia manasitrana tanteraka amin'ny dimy (5) andro na inona na inona karazana.
Valiny: Ny loko loko anatiny dia sariaka sy loko hoso-doko.
Valiny: mitovy amin'ny sary hoso-doko hoso-doko, rehefa mandoko ny firafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafi-panabeazana. Tandava isak'andro, mihetsika iray. Farano amin'ny alàlan'ny sary hosodoko.
Valiny: Raha manana loko na simika sisa tavela ianao, dia tsy tokony hatsipy any anaty fitoeran-drano na rano misokatra. Azonao atao ny manolotra azy ireo amin'ny asa soa.
Valiny: Ho an'ireo mpivarotra / mpaninjara momba ny raharaham-barotra / mpandraharaha, dia afaka miara-mientana aminay ianao amin'ny alefanao aminay ny momba ny anaranao feno, ny adiresy, ny antsipirian'ny fifandraisana ary ny fangatahana ao amin'ny wangyanzhao@hebeicopihue.com na shiner@hebeicopihue.com
Ny lamba vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona
Hoso-doko vita amin'ny haingo
Volavola maina vovoka fanoratana indostrialy
Paint gorodona indostrialy